Iiprojekthi zeCraft Samhain
Catherine Delahaye / Getty Izithombe
Njengoko iSamhain isondela , unokuyihobisa ikhaya lakho ngeeprojekthi ezininzi ezilula. Qala ukugubha ngokukhawuleza kunye nale mibono ejabulisayo nelula ezukisa isivuno sokugqibela, kunye nomjikelezo wobomi nokufa.
I-pagan Treat Bags e-Samhain
Ngaba unabantwana oza eSamhain? Yenza iingxowa zonyango ngePagan isihloko. USara Golonka / iTetra / Getty Izithombe
Ngaba unabantwana bamaPagan abaza kwiSiganha? Unokuba nombhiyozo onobuntwaneni ngokubeka ndawonye isikhwama se-goodie esimele umoya wakho wobuxoki. Okubalulekileyo apha kukukwenza ezinye izinto zokudala, ngaphandle kwebhokisi ukucinga. Ngokuqinisekileyo, kukho itoni ye-Halloween imihlobiso kwivenkile ngeli xesha lonyaka, kodwa akubona bonke abo baxhomekeke kwiinkqubo zonqulo zamaPagan. Eyona nto ingakumbi malunga nokubhiyozela iHalloween, okulungileyo, ngaphandle kokuba ufuna izinto ezinobuntwana ezihlonipha ubuKrestu bobuqaba.
Nazi izinto ezimbalwa zokuzama:
Zihombise iingxowa ngokwazo iimpawu ezinentsingiselo kuwe - kuxhomekeke kwi-pantheon iqela lakho lizukisa, unokuquka iiplani ezidibene neGrike, yamaRoma, iCeltic, okanye iinkolelo zamaNorse.
Amancinci amancinci omzimba: yenza ingcaciso encinane yeLavender Dream Pillow , ukuthunga izityalo kwi-sachet.
Amakristali kunye neempawu zamatye : Ngethuba nje abantwana abaya kumcimbi wakho bangaphaya kokubeka-konke okusemlonyeni wakho, unokubandakanya i-quartz ephakamileyo yothando, i-hematite yokukhusela, kunye nokunye.
I-Altar Kit ephathekayo : Ngokuxhomekeke kwiminyaka emininzi abantwana, cinga ngokwenza ibhokisi yesibingelelo ehambelana nekhefu okanye ipokhethi. Oku kungenakuncedo okanye kukhuselekile kubantwana abancinci - asifuni ukunikela izinto ezibukhali kubafundi besikolo samabanga asemva - kodwa i-tweens elidala kunye nentsha ingayisebenzisa ngokufanelekileyo.
Amathuluzi okuhlukanisa: Unokwenza i-pendulum elula ngetye ehlanganiswe ngetambo kwaye iqhotyoshelweyo ekupheleni kwekholeji. Unokwenza ukubhula okulula kusekwe yimpawu zokupenda kumatye okanye kwiidiski zokhuni .
IiWands: Yenza umgcini olula usebenzisa intonga kunye nekristal ehlanganiswe ngetambo.
Iimpawu zobuthixo: Ngaba isiko lenu ludumisa unkulunkulu okanye unkulunkulukazi othile? Cinga ukungezelela iimpawu zommeli - iinqununu ze-Athena , iinkati zeBastet , okanye i- antler yeCernunnos . Enye inokukhetha ukushicilela umfanekiso wesayizi wesikhwama sobunkulunkulu kwikhadi elikhuni, kongeza umthandazo kuye unkulunkulu wakho / i-dess on the side side, kwaye udibanise.
Ekugqibeleni, khumbula, iSamhain ngumhla ofana neHalloween, ngoko ungalokothi ungathinteli amandla ambalwa amacwecwe ahlelwe ngokusemgangathweni!
Greta Mastauskaite / EyeEm / Getty Izithombe
Ngexesha le- Samhain lijikeleza, igadi yakho yemifuno mhlawumbi ibheka buhlungu. Ngoku lixesha lokuthabatha yonke loo mizila oyivunayo kwaye womiswa ngoSeptemba, kwaye uyisebenzise kakuhle. Isiqhumiso sesiqhumiso sigqibelele kwi-Samhain seance , iseshoni sokubhula , okanye nayiphi na enye ikwindla esebenza.
Le recipe yinto yokuqhumisela, kodwa unokuyilungisa ukutyelela okanye i-cone zokupheka ukuba uthanda. Njengoko uxuba kwaye udibanisa isiqhumiso sakho, gxininisa injongo yomsebenzi wakho. Ngaba unqwenela ukuqhagamshelana nomoya wokhokho ode ? Ngaba unethemba lokuzisa imibono yakho ngendlela ephuphayo? Okanye ngaba mhlawumbi ukhangela ukuphucula amandla akho okucamngca ? Gxininisa injongo yakho njengoko udibanisa izithako zakho.
2 izingxenye zeCinnamon
I-part 1 cloves
1 inxalenye yegazi le-Blood resin
1 inxalenye yeHesopop
1 inxalenye yePatchouli
2 izingxenye zeRosemary
1 inxalenye yeSage
I-dash yolwandle ityuwa
Yongeza izithako zakho kwisitya sakho sokuxuba esisinye ngexesha. Nciphisa ngokucophelela, kwaye ukuba amaqabunga okanye ezinye izinto kufuneka zichithwe, sebenzisa umdaka wakho kunye ne-pestle ukwenza njalo. Njengoko udibanisa imifuno ndawonye, ​​khankanya injongo yakho. Unokufumana kukunceda ukuhlawula isiqhumiso sakho ngesiqu. Umzekelo, ukuba uya kusebenzisa isiqhumiso sakho ngexesha lokuhlala, ungasebenzisa oku:
Umkhusane unqabile, inyanga ikhanya
kwaye ndidibanisa lo mlingo ngobusuku baseSamhain.
Ukubhiyozela ubomi nokufa nokuzalwa kwakhona
kunye nale mihlambi ndivune emhlabeni.
Ndiyithumele intliziyo yam ngomsi emoyeni
kwaye ubize abo bachitha igazi labo.
Ndiyacela oobawo ukuba bayikhokele baze bandinde,
Njengoko ndithanda, kuya kuba njalo.
Gcina isiqhumiso sakho kwisitya esitywinwe. Qinisekisa ukuba uyibhawule ngeyona njongo kunye negama, kunye nomhla owawudala. Sebenzisa ngaphakathi kweenyanga ezintathu, ukuze ihlale ihlawuliswa kwaye ihlambuluke.
Misa i-Ancestor Shrine
Andrew Bret Wallis / Getty Izithombe
Kwiinkcubeko ezininzi zamaPagane, ookhokho bahlonishwa , ngakumbi eSamhain . Le Sabatha, emva kwayo yonke into, ubusuku apho isigqubuthelo phakathi kwehlabathi lethu kunye nehlabathi lomoya lisebunzima kakhulu. Ngokumisela indlu yokhokho okanye isibingelelo, unokubahlonela abantu begazi lakho - i-kinfolk yakho kunye neentlanga eziye zanceda ukuma umntu onjalo. Esi sibingelelo okanye indlu engcwele ingasetyenziselwa ukuphela kwexesha le-Samhain, okanye unokushiya unyaka wonke ukucamngca kunye nemikhuba.
Ukuba unayo igumbi, kukuthabatha ukusebenzisa ithala elipheleleyo le ndawo, kodwa ukuba indawo iyinkinga, ungayifaka ekhoneni lomgcini wakho wokugqoka, kwi-shelf, okanye kwisambatho phezu kwendawo yakho yomlilo. Kungakhathaliseki, yifake kwindawo apho ingahlala ingaphazamiseki khona, ukuze imimoya yookhokho bakho iqokelele apho, kwaye unokuthatha ixesha lokucamngca kwaye uzukise ngaphandle kokuhambisa izinto malunga naso sonke ixesha xa umntu efuna ukusebenzisa itheyibhile.
Kwakhona, khumbula ukuba unokumhlonela nabani na oyithandayo kule ndawo. Omnye akudingeki abe ngumhlobo wegazi ukuba abe yinxalenye yoobukho bokomoya.
YENZA I-SPACE EYEMISEBENZI
Okokuqala, yenza ucoceko lwangaphakathi lwesithuba. Emva kwakho konke, awuyi kumema uSomandla uGertrude ukuba ahlale esihlalweni esingcolileyo, ngaba wena? Dutyisa isicatshulwa esiphambili okanye isitrato uze uyisuse kuyo nayiphi na into engahambelani ne- shrine yakho. Ukuba uthanda, ungazibeka ubungcwele njengendawo engcwele, ngokuthi into enjenge:
Ndizahlulela le ndawo kubo
igazi lawo ligijima kum.
zam izikhokelo kunye nabagcini bam,
kunye nabo boomoya
Njengoko wenza oku, susa indawo leyo nge-sage okanye sweetgrass, okanye uhlambele ngamanzi ancancisiweyo. Ukuba isithethe sakho sidinga, unokuba unqwenela ukungcwalisa indawo kunye nazo zonke izinto ezine .
Ekugqibeleni, yongeza iingubo zesibingelelo sokunceda uwamkele ookhokho. Kwezinye iinkonzo zaseMpuma, ilinen ebomvu isetyenziswa rhoqo. Kwezinye iindlela ezisekelwe kwiCeltic, kukholelwa ukuba umphongolo kwisiqwenga sesibingelelo unceda ubophe umoya wakho kubo bookhokho bakho. Ukuba unayo ixesha ngaphambi kweSamhain, unokufuna ukwenza i- Ancestor Altar Cloth .
WAMELE UKUHLALA KWAKHO NOKWENZA
Kukho iintlobo ezahlukeneyo zookhokho, kwaye zeziphi ozikhethayo ukuzibandakanya ziphezulu kuwe. Kukho igazi lethu ootata, ngubani abantu esivela kuwo ngokuthe ngqo-abazali, oogogo nomkhulu, njl. Kukho nookhokho be- ancestry , abamele indawo esihlala kuyo intsapho kunye nosapho. Abanye abantu bakhetha ukuhlonipha ookhokho bomhlaba-imimoya yendawo ohlala kuyo-njengendlela yokubulela. Ekugqibeleni, kukho okhokho bethu bokomoya-abo singasayi kuhlanganiswa ngegazi okanye umtshato, kodwa ngubani na osithandayo njengentsapho.
Qala ngokukhetha izithombe zookhokho bakho. Khetha imifanekiso enentsingiselo kuwe- kwaye ukuba iifoto zenzeka ukuba ziphile kuzo kunye nabafileyo, oko kulungile. Hlela iifoto kwisibingelelo sakho ukuze ubabone bonke ngokukhawuleza.
Ukuba ungenayo ifoto ukumela ukhokho, unokusebenzisa into ayenaye. Ukuba ubeka umntu kwisibingelelo sakho ohlala ngaphambi kwe-1800s, amathuba athile akukho mfanekiso okhoyo. Endaweni yoko, sebenzisa into enokuba yinto yomntu - isiqwenga sezinto zokugqoka, isitya esiyinxalenye yentsapho yakho ye-heirloom isethi, iBhayibhile yeentsapho, njl njl.
Ungasebenzisa kwakhona iimpawu zookhokho bakho. Ukuba usapho lwakho lusuka eScotland, ungasebenzisa i-kilt pin okanye ubude becala ukumela indlu yakho. Ukuba uvela kwintsapho yeengcweti, sebenzisa into eyenzelwe okanye eyenziwe ukufuzisela ubugcisa bentsapho yakho.
Ekugqibeleni, unokongeza ishidi lomnombo okanye umthi wentsapho ekuhlaleni. Ukuba unayo umlotha wathandekayo ohamba naye, udibanise nabo.
Xa unayo yonke into ehlala kuyo emele okhokho bakho, qwaba ukongeza ezinye izinto ezimbalwa. Abanye abantu bathanda ukufaka ikhandlela zokukhupha, ngoko banokuzikhanyisa ngelixa becamngca. Unokuba unqwenela ukongeza isitya okanye inkomfa ukufuzisela isibeleko soMama womhlaba. Unokongeza isimboli sakho sokomoya - i-pentagram, i-ankh, okanye enye imifanekiso yeenkolelo zakho.
Abanye abantu bayeka iminikelo yokutya kwiibingelelo zabo, ukuze ookhokho bakwazi ukudla kunye nosapho.
Sebenzisa isibingelelo xa wenza ukucamngca kwokhokho waseSamhain okanye isiko lokuhlonela ookhokho .
Yenza iingubo ze-Altare ye-Ancestor
Indwangu yesibingelelo sekhokho yinto enokuyenza nayiphi na enye yonyaka, nangona ingafika ngokukhethekileyo kwi-Samhain , xa abantu abaninzi bakhetha ukwenza imikhosi ejoliswe kwikhokho . Le projekthi ingaba yinto elula okanye eyinkimbinkimbi njengoko uthandayo, kuxhomekeke kwimithintelo yenkxaso yakho, ubuchule kunye nobuchule bokuqulunqa.
Indwangu yamatye ebomvu okanye i-cream, okanye enye ingcezu yengubo
Ukugqithisa i-embroidery floss kunye ne-hoop, okanye iimpawu zomzimba
Umnombo woovimba okhokho bakho
Amanqaku ambalwa apha, ngaphambi kokuba uqalise. Akukho mgaqo onzima kunye nokukhawuleza malunga nendlela yokwenza oku - ingcamango yobugcisa ekhethwe ngabantu. Yenza oko kusebenza kakuhle kuwe. Ukuba unesandla kunye nenaliti kunye nentambo, ungayifaka isambatho - ngokuqinisekileyo kuya kuhlala ixesha elide ngaleyo ndlela. Ukuba awuqinisekanga malunga nobuchule bakho bokubamba, ungasebenzisa amanqaku amacwecwe afanelekileyo (khumbula ukuba olu khetho lunokuthi lunciphise ukukwazi ukuhlamba iingubo zesibingelelo xa lihlambe okanye lihlambuluke ngexesha lokoqobo).
Ngokuphathelene nomnombo wokuzalwa, ungayigcina kulula xa uthanda, okanye ukuba awuzange wenze naluphina uphando lozalo. Uya kufuna amagama obazali bakho, kubazali babo, noogogo nomkhulu babo, njalo njalo. Ukuba ufuna ukubandakanya abantwana bakho, unokukwenza oko.
Qala ngokuzibeka phakathi, kwaye ubhala igama lakho ngokucophelela ngepencil elula engacacanga - ezi zihlambayo okanye zitshintshe lula xa usuphelile. Isebe, kuquka nabazali bakho amagama angaphezu kwakho, enye kwicala ngalinye. Ukusebenzisa imizila yokudibanisa wonke umntu, ngokukongeza udibanise amagama ookhokho bakho. Unokuquka imihla yokuzalwa nokufa, okanye ukubeka amagama ukuba unendawo.
Kungcono ukwenza konke oku kwipencil yokuqala - okanye ungcono, kodwa sebenzisa i-Post-It Notes, enye yegama lekhokho ngalinye-ukubeka abantu malunga neyambatho. Ukuba uyazi amagama amaninzi okhokho ngapha nangapha, kodwa kuphela ezimbalwa kwenye, ingaqala ukukhangela ngokukhawuleza ngokukhawuleza, ngaphandle kokuba unako ukulungisa abantu (ke kutheni amanqaku amathandayo aphezulu).
Xa usufumene ukufakwa komntu wonke, yongeza amagama kwipencil yomzimba uze uquke abantu abaninzi njengoko uthanda. Ukuba uya kuguqula amagama, sebenzisa ukusuka kwelinye icala ukuya kwelinye, ukuze ugcine izinto ezilula - usenokufuna ukwenza amasebe ahlukeneyo entsapho, okanye izizukulwana ezahlukileyo, kwimimandla ehlukile. Ukuba ukhetha ukusebenzisa amanqaku omsebenzi wokugqibela, qaphela! Izibonda zihlala zikhethwa, kodwa abamakishi bangasigxina.
Gcina ukhumbule ukuba isenzo sendalo sinokuba ngumlingo, kwaye ungasebenzisa ukucwangciswa kwesi sambatho sesibingelelo njengesiko kunye kunye. Ngokukodwa ukuba ulunge, kunomxholo ocamngca kakhulu kwinkqubo yokudala.
Emva kokuba ubeke amagama abo bonke emacaleni, sebenzisa njengengubo yecalatta yeemfundiso ezibandakanya umsebenzi okhokho.
Yenza i-Grave Rubbing
Lee Snider / Getty Izithombe
AmaPagan amaninzi anamhlanje afaka unqulo lwabazali njengenxalenye yemibhiyozo yabo yaseSamhain - akukho ngaphandle kwesiqhelo ukuhlangabezana namalungu omphakathi wamaPagane anokukwazi ukuphinda abhale umzukulwana wabo emva kweenzukulwana ezilishumi okanye ngaphezulu. Ukongezelela, kuba kuyaqhelekileyo kumaPagan namhlanje ukujonga ukufa kungekuphela kodwa njengesiqalo sesigaba esilandelayo sokuphuhliswa ngokomoya, ukuxubha kweengcwaba kuyaziwa ngabantu abaninzi bamaPagani. Kukulungele ukusebenzisa ezo ntlobo kunye namalungu entsapho, kodwa xa ufumana ilitye lelitye elikubetha unomdla, akukho nto iphosakeleyo ngokwenza ukuxubha kuyo.
QAPHELA: Siyabona ukuba abanye abantu baziva bexakeka kakhulu kungakhathaliseki ukuba niyithatha ukuthintelo. Nangona kunjalo, kuba kukho iingcali zamangcwaba ezithi ukucubungca ngokucokisekileyo okungafanelekanga akufanele kwenzeke umonakalo kwilitye elisezantsi, siza kuqhubeka siquka le nqaku apha kwisiza. Sebenzisa umgwebo wakho obalaseleyo, kwaye ukuba uyaphikisana nokudalwa kweerbbings, ungayenzi.
Kubalulekile ukugcina engqondweni ukuba ukuba uphazamisa ngamangcwaba, kufuneka uhloniphe. Akunabo kuphela abantu abalele apho, kodwa nabo bezinto eziphilayo ezinokuthi zenzeke xa ulapho. Akukho nto ephosakeleyo ngokuzonwabisa, kodwa nceda wenze umgudu wokungaphazamisi umntu onokulila. Akubona wonke umntu obona ukufa ngendlela efanayo , ngoko ngelixa intsapho yakho ingayamkela njengenxalenye yomjikelezo wemvelo, enye intsapho inokutshatyalaliswa yimvakalelo yokulahleka. Kwakhona, khumbula ukuba amangcwaba amaninzi ayipropati yangasese. Ngaphambi kokuba ujikeleze kuzo, khangela ukuba ufuna ukuba ufumane imvume. Ukuba wenza, qiniseka ukuba uyifumane phambi kokugqitywa.
I-rubbings yamatye yintloko yindlela ekhethekileyo yokulondoloza ixesha elidlulileyo kunye nokufumana i-décor ecocekileyo. Nangona ukuxubha ngokuqhelekileyo akuvami ukudala umonakalo kumatye okukhanda, ikakhulukazi amatsha, kukho izicwangciso ezithile okumele zithathwe. Ukuba ilitye ligugile okanye lidibene, yidlulise. Ukuqhawula ilitye eliye lonakaliswe lingenza ukuba i-flake kunye ne-chip ibe yinto engenakulinganiswa nayo. Endaweni yoko, khetha amatshe asemgangathweni - iziphumo ezilungileyo zivela kumatye angama-granite aqingqiweyo okanye amanqaku afanelekileyo.
Uza kufuna iphepha elincinci (iphepha elimhlophe elimhlophe lisebenza kakuhle, kodwa ungayenza imibala ngokunjalo), ikrayrayoni enkulu (mhlawumbi ibomnyama, kodwa kwakhona, uzive ukhululekile ukuzama izinto ezintsha) okanye ukuxubha i-wax, i-masking tape, kunye ibrashi yokupenda e-soft-brown epholileyo ukucoca i-debris kwilitye. Ungaphinda ufune ukuthatha ityhubhu yekhadibhodi kunye nawe ukugcina iirubhi zakho zokuthutha ekhaya. Ndiyakuthanda ukuzisa incwadana kunye neepensile ukuze ndihlawule amanqaku malunga namangcwaba kunye nomntu onelitye lekhanda eliye ndalichitha. Isibambo sesibini segadi sinokuba luncedo ukucoca ukhula phantsi kwesitye.
Xa usukhethile ilitye lakho, lixubhe ngokulula kunye nebrashi yakho yokupenda. Uya kumangaliswa ukuba uthuli kunye nezinto eziphathekayo zingakwazi ukuqokelela kwimifanekiso, ungatsho nto yeentaka. Emva kokuba uhlambulukile, sebenzisa iteksi yokumisa ukuze ugcine iphepha elikuloo ndawo ofuna ukuyifaka. Zama ukwandisa iphepha elidlulileyo phezulu kunye namacala omatye - ngaloo ndlela awuzukufumana amanqaku ekhrayoni apha.
Qala ukuxubha ngokugcwalisa emaphethelweni angaphandle kwendawo eveziweyo. Oku kuya kunika ithuba lokusebenzela. Xa usuwenze oko, hlela kwiziko kwaye uqale ukusebenza ngaphandle, ubuyele kwimida yakho. Sebenzisa ubuso obunzulu bomkhrayoni okanye i-wax, kwaye wenze ukukhanya, kunye nokubetha. Ukuba kubonakala ngathi ukuxubha kwakho akubonakali kakuhle, ungakhathazeki. Unokubuyela emva kwaye ungeze inkcazelo engakumbi emva koko. Gcina iifayili yakho yokubetha ukukhusela ukuhluka kwebala. Njengoko ukwenza ukuxubha kwakho, unokufuna ukunikela umthandazo omncinane okanye intsikelelo kumntu onelitye oyisebenzisayo.
Emva kokuba usuphelile, phindela emva kwaye ujonge ukuxubha kude. Amathuba kukuba ngokuwujonga ukusuka kumanyathelo ambalwa, uya kuphawula ezinye izitenxo kwi-shading okanye iinkcukacha. Buyela emva kwaye uzilungise, ngaphandle kokubeka uxinzelelo olunzulu phezu kwelitye. Xa unelisekile ngesiphumo, susa ngokucokisekileyo yonke iteksi. Qinisekisa ukuba uhlambulule iipaki zephepha okanye enye inkunkuma. Gqithisa ukuxubha kwakho kwaye uyibeke kwibhubhu yakho ukuze ugcinwe.
Xa ufika ekhaya, u-matte uphinde ulunge umsebenzi wakho uze uwuxhome eludongeni lwakho. Iqoqo le-rubbings yamangcwaba yintetho enqabileyo yencoko yonke iminyaka, kodwa ngokukodwa kwi-Samhain. Ukuba unako ukufikelela kwiingqungquthela zokhokho bakho, udonga lwama-rubbings adibeneyo lunokuba yiqonga eligqibeleleyo kwilifa lakho .
Yenza i-Samhain Straw Man
U-Alan Tobey / Getty Images
Kwiingxelo zeJulius Caesar, udibanisa ukutshiswa komntu oqhawulayo kwi-Druid isenzo sombingelelo wabantu - ngokuqinisekileyo, umntu ohlaziwayo wayeyindawo apho umntu wangempela abekwe khona. Ngethamsanqa, loo mkhuba yafa kunye neDruids , kodwa abantu abaninzi banomdla wokudala indoda evela kumyezo ngexesha lokuvuna. Kwezinye iindlela zePagan kunye neWiccan, le ndoda iyaziwa njengeNkosi yoBusika, kwaye inokudalwa kwisikhululo se-altare ukuze ubukele indlu yakho kwiinyanga ezibuhlungu.
Eneneni yeyona ndlela elula kunye neephambili zeeprojekthi onokuzenza. Unokuyifakela kumasiko akho aseSamhain , okanye wenze enye nayiphi na ixesha. Uzakufuna izitshixo ezimbini eziseleyo kwintsimi yakho (ukuba awunayo ingadi, kulungile ukuqokelela ezinye izityalo ecaleni kwendlela) kunye nomtya othile. Ukuba usebenzisa izityalo ezisuka kumyezo wakho, zikhululeke ukudibanisa kwaye udibanise amasebe ahlukeneyo kunye nemifuno. Qinisekisa ukuba esinye isitya sezityalo sincinci ngaphezu kwesinye.
Ngexesha elide lomtya, qhawula umxube we-fatter ndawonye malunga neyesine kwendlela ukusuka phezulu. Le siphelo iba yintloko.
Ukwahlula isiqhezu kancinci, uze udibanise ityhula encinane yokhula phakathi kweziko. Ezi ziya kuba ziingalo. Sebenzisa umtya kwaye ugobe ngendlela ehamba phambili ejikeleze umzimba ukuze ubambe iingalo endaweni. Uyibophe ukuze uyigcine, kodwa ungayinqumisi umtya.
Ekugqibeleni, wasasaza inxalenye engezantsi yecala eliqhekezayo, ukwenza iinqunithi ezimbini njengemilenze. Yenza umtya phantsi uze ugobe "ngamathanga" ukugcina imilenze isendaweni. Ukuba amagatsha akho abonakala ngathi aphelile kakhulu, qhawula ubude obuncinane bomtya ngaphakathi kwindawo ezijikelezayo kunye neenyawo; njengoko i-greenhouse eyomileyo ayiyi kubambelela.
Lo luyilo olusisiseko, kwaye unokushiya umntu wakho njengomnatha njengokuba uyakuthandayo okanye umhle kakhulu, kuphelele kuwe. Londoloza kuze kube nguNtsundu, uze umtshise njengenxalenye yemibhiyozo yaseBellane .
Yenza lula i-Apple Garland
I-aple igqabi kakhulu kulula ukwenza. Unokwenza ubude obunqwenelayo, kwaye yenza indlu yakho iphunga kakuhle kwinkqubo - kunye neepula zamagqabha ziyo yonke indawo ngexesha le- Samhain lijikeleza .
Uzakufuna iipulo ezininzi ezininzi zanoma imuphi umbala, ijisi lemon, amaqabunga angomileyo, amaqabunga enqabileyo, iintonga ze-sinamon, i-raffia, kunye ne-florist's wire.
Qala ngokukhangela kwaye ulungise iiapulo, uze uzicwangcise ngokuthe ngqo kumbindi malunga ne-3/8 ". Gcwalisa isitya nge juisi ye-lemon, uze ufake iiplisi zakho ze-apula kuyo. Vumela ukuba baguqule malunga nemizuzu elineshumi - oku kubathintela ukuba baphenduke obumdaka kunye nebala. Susa iiplisi ze-apula kwisitya kwaye uzibambe zome ngephepha leshidi. Bhaka ii-apula zakho malunga neeyure ezintandathu kwi-degrees ezingama-200. Ukuba uthanda, ngaphambi kokubhaka ungawahambisa ngomxube we-sinamoni kunye ne-nutmeg.
Emva kokuba amaapulo akho aphelile ngokupheleleyo, umnandi uyaqala. Ukusebenzisa i-wire florist, qala udidiyele ii-apula. Intambo kufuneka ihambe ngqo kwiipulo, kodwa ukuba unenkathazo, yenza umgodi nge-toothpick. Phakathi kweminye iiplani ezimbalwa ze-apple, umtya wechungechunge linye. Ungaphinde usebenzise ii-apula kunye namaqabunga e-bay kunye neendlovu ezenziwe kwizinto zokutshiza.
Yenza igrare lakho libe lide okanye elifutshane njengoko uthanda - okanye kude kube neenkukhu zentlungu zakho-kwaye ke nganye iphothi iphele malunga nentonga ye-sinamoni. Mbopha iqela le-raffia ejikeleze iiphelo kunye, kwaye ulandele ikratshi lakho eludongeni, kwi-mantel yakho, okanye ngaphaya kwendlu yakho yangaphambili.
Olunye uhlobo kwi-aple granti ukwenza ubude obuncinci kwaye ulunqande kwisangqa, ukwakha i-aple wreath. Mbopha ingcezu yelinen - okanye ugobe intsalela yentsimbi ye-florist - ukuya phezulu ukwenzela ukuba unokuyibhalela kwisipiko okanye kwisikhonkwane.
Iprojekti yoBuchule beChic Kitchen
Kukho intshukumo ekhulayo ngaphakathi kwePaganism yanamhlanje eyaziwa njengekhitshi. Ikhitshi, emva koko, intliziyo nentloko yezindlu ezininzi zanamhlanje. Xa unomhlangano ekhayeni lakho, iindawo ezininzi zeendwendwe zakho ziphuma phi? Kutheni, ikhitshi, kunjalo! Kwakhona, ngenxa yoqoqosho olunciphiso, abantu abaninzi banokwenza ukutya kwasekuqaleni kwaye ikhitshi iphinda ibe yindawo apho abantu basebenzisa iiyure, kungekhona nje imizuzu embalwa. Ngoko akumangalisi ukuba ikhishini lokukhwabanisa libone ukuphakama kwindumo.
Ingaba ushiywe uhla uvelisa ujikeleze ngeenxa zonke ukuba awuqinisekanga ukuba wenzani na? Zisebenzise ithuba, kwaye ubeke ndawonye umlusi omuhle wekhitshini ukuba ubukele indlu yakho kunye neentlanga ekuwa. Lo mgcini wekhishini kulula ukwenza, kwaye uya kukugcina ngenkampani xa uxuba umlingo wekhishi.
Umncinci owa yimifuno, njengomntwana wesantya esikhwameni okanye umpu
Ipeyinti ye-acrylic emnyama
I-black nest chenille ipem
Izixhobo zobungqina, njengentsimbi kunye nomhlaza
Sebenzisa umzobo omnyama ukwenza ubuso kwitshalo yakho. Sika isiqu se-chenille kwisiqingatha sokwenza iingalo, uze uziphosele kwisikhumba semifuno ukuze wenze izixhobo. Yongeza intsimbi, i-broom, okanye ezinye izesekeli, kwaye vumela ikhishi lakho lisebenze njengomgcini weentloko zakho!
Iqungu linye lamalungu awaziwa kakhulu eentsapho ze-squash. Ukususela ngoSeptemba ukuya kuNovemba, bahlala kuyo yonke indawo-sibona bavezwe kwii-jack-o-lantern, bepende, kwaye bahlasela yonke indlela ehamba kwidolophu. Njengoko iSamhain ikhula ngokusondeleyo, isivuno seengqungquthela siphezulu, kwaye kukho zonke iintlobo zezinto onokuzenza ngazo. Wonke umntu uthanda amakhandlela, ngoko kutheni ungasebenzisi amathanga amancinci kwi-jazz uphilo lwakho lweSabbat?
Into yokuqala oza kuyidinga ithanga le-baking-size (ungasebenzisa i-squash ye-acorn yale projekthi nayo). Nasi isicatshulwa: ngaphambi kokuba uthenge ithanga kwiqhosha lempompo, khangela isicatshulwa sakho sokuthengisa esitolo. Ukuba awufuni ukusebenzisa i-wax eninzi, zithengela iipompo ezincinci-zincinci kwaye zisebenza lula.
Ngaphandle kokuba usebenzise izixhobo zokwenza ikhandlela kunye neparafini, enye into oyakuyifumana ukufumana i-chips yax. Ezi zingabizi, zinyibilike kalula kwaye zikhuselekile kwi-microwave yakho, kwaye utshise ucoceko kune-paraxine. Ukuba usenayo iparafini, ungasebenzisa oko kule projekthi, kodwa kuya kufuneka uyancibilike ngaphezu kokutshisa kabini. Ukuba ufuna ukufaka umbala okanye iphunga, uya kufuna enye yale nto.
Ekugqibeleni, uya kufuna i-wick. Unokwenza ngokwakho ngokubhinqa intambo kwi-wax, okanye ungathenga i-wick eyenziwe ngaphambili kunoma yiphina isitoreji okanye isitoreji sokugcina. Izinto ezenziwe ngaphambili zine-disc encinci yesiseko phantsi kwesiseko.
Hlanganisa zonke izinto zakho, kwaye usike phezulu phezulu kumathanga. Hlasela i-goop ngaphakathi (ungagcina imbewu yokugcoba kamva) kwaye uhlambe i-intérieure ecocekileyo. I-melon-baller iyasebenza kakuhle kweli nqanaba.
Gcoba kwakhona i-wax-kwakhona, ukuba usebenzisa i-soy chips ungayitshatya kwi-microwave. Iibhokhwe ezisibhozo ze-chips ezomileyo ziza kukunika malunga neekomityi ezine ze-wax edibeneyo, efunyenwe ukuzalisa i-pumpkin ye-baking okanye i-squash squash. Ngaphambi kokuba uthele i-wax, khusela i-wick ephantsi kweengqimba ngaphakathi. Kulungile ukuba ihamba phezu kancinci, kuba uya kuyiphakamisa kamva xa i-wax isendaweni.
Emva kokuba i-wax yakho iyanyibilika, yongeza iphunga okanye umbala webala uma uthanda. Faka ngaphambi kokuthululela. Gcwalisa ithanga nge-wax ukuya kumda wangaphantsi wokuvula. Mhlawumbi uya kuba nekhefu elincinane-ungalilahli; uya kuyidinga kamva!
Emva kokuba uthe wathululela i-wax, ukuba i-wick ibonakala ixhomekeke kwelinye icala okanye enye, faka ibhotela yebhotela ngaphaya kwempompo ukuze ubambe i-wick uze uyigcine.
Xa i-wax sele ikhulile, unokwazi ukudibanisa encinci okanye i-indent kwi-wick apho i-wax idibene khona. Sebenzisa i-wax eseleyo ukuzalisa le ndawo. Hlola umlenze emva koko awukho ngaphezu kwe-1/4 "ende.
Xa usitshisa ikhandlela lakho, qaphela ukuba ungashiyi ngaphandle. Ukuba ngaphakathi kwempompo iqalisa ukutshisa, faka ikhandlela lakho ngokukhawuleza. Yisebenzise kwisibingelelo sakho okanye ngeenxa zonke kwindlu yakho njengenxalenye ye-Samhain yakho yokuhlobisa.
Yenza i-Samhain Skull Garland
Intloko ibonakala rhoqo kwiimpawu ezizungeze i- Samhain - emva koko, eli lixesha xa umhlaba ufa, kunye nomntu wonke ugxile kwiHalloween. I-Samhain sabbat ibhiyozela umjikelezo wokuzalwa kwakhona, kwaye iyavuma ukuba ngobomi, kufuneka kubekho ukufa. Le ngqayi yeganga, ephefumlelwe ngamagqabha e-candy yoSuku lweMexico lweNkundla yokufa , yinto elula yokwenza iprojekthi ongayenza kunye nezinto eziphathekayo ngaphakathi kwendlu yakho.
Uzakufuna oku kulandelayo:
Uvakalelwa ngemibala eyahlukileyo
1/2 "ebanzi ibhendi
Qala ngokusika i-crake shapes kwi-feelings. Abo abasesithombeni banokuba ngamasentimitha amabini ubude kwaye malunga nobubanzi bentshi. Uzakufuna iziqwenga ezimbini - phambili nangemuva - kwikrele ngalinye uceba ukwenza.
Ukwenza ubuso, bhoxa ibini leembalo ezincinci kwamehlo. Beka isiqhekeza esicatshangelwayo esivela emva kweemingxuma, kwaye usebenzise i-floss yokugcoba ukuyibeka endaweni. Emva kokuba wenze loo nto, yongeza ezinye iimpawu ezinjengeenyosi okanye amazinyo. Yenza ngobuchule njengoko uthandayo - faka iintyatyambo, i-swirls, amachaphaza, njl., Kwiakrele zakho.
Emva kokuba uyihlobisa ubuso, wabeka isiqwenga sokuxhaswa, kwaye ugxininise malunga ne-3/4 kwendlela ejikeleze umgca wekrele. Ukucoca ngaphakathi ngaphakathi ngebhola yeebhola zekotoni, uze ugwebe uvalwe.
Emva kokuba wenze zonke iighafi zakho, zilinganisa ubude bebhebhoni. Sebenzisa ukubetha kwesibhokhwe ukumisa iibhakhoni kwi-ribbon, malunga ne-8 ukuya kwe-10 "ngaphandle. Hlaba igrafu yakho emnyango wakho okanye uyibeke kwisibingelelo sakho.
Ukuba unayo iikati, unokongeza i-pinn ye catnip kwi-crack engxenyeni phambi kokuba uyibeke. Yenza oku kunye neenqaqa zeehaqa, uze uzibophe, kunye neentsimbi, kwisiqwenga sebhebhoni kunye nentonga ekwakheni ithoyizi yekati - intsimbi yakho oyithandayo iya kukubulela!
Ndiyichane ngqo! 20 I-Crazy Christmas Craft FAILS
I-ActiveCaptain Guidebook ye-Cruising Guide